26 / 12 / 2020 /i aretin-kozatra, rheumatism/av loza
Betsaka ny olona voan'ny fibromyalgia ihany koa no voan'ny plantar fasciitis. Amin'ity lahatsoratra ity dia mijery akaiky kokoa ny fifandraisana misy eo amin'ny fibromyalgia sy ny plantar fasciitis.
Ny plantar fascia no takelaka tendon eo ambanin'ny tongotra. Raha misy tsy fetezana, fahasimbana na fivontosana mitranga amin'izany dia antsoina hoe plantar fasciitis izany. Ity dia toe-javatra iray izay mety hiteraka fanaintainana eo ambanin'ny faladian'ny tongotra sy manoloana ny voditongotra. Eto isika, ankoatry ny zavatra hafa, dia hamakivaky ny fomba hampifandray mivantana amin'ny fibromyalgia ny tavy mampifandray amin'ny fanaintainana (fascia).
Soso-kevitra tsara: Eo amin'ny farany ambanin'ny lahatsoratra dia afaka mijery horonan-tsary misy fiofanana miady amin'ny plantar fasciitis ianao. Manome torohevitra momba ny fandrefesana tena ihany koa izahay (toy ny ba kiraro famoretana plantar fasciitis)
Inona ny Plantar Fascitis?
Fascia mampihetsi-po amin'ny fanaintainana sy Fibromyalgia
Ny fifandraisana misy eo amin'ny Fibromyalgia sy Plantar Fascitis
Fepetra manokana manohitra an'i Plantar Fascitt
Fanatanjahan-tena sy fanofanana miady amin'ny Plantar Fascitis (ao anatin'izany ny VIDEO)
Ao amin'ny sary topy etsy ambony (Source: Mayo Foundation) dia afaka jerentsika ny fihanaky ny fascia plantar avy eo amin'ny tongony ary miraikitra amin'ny taolana ombelahin-tongony. Ny fasciitis plantar, na plantar fasciosis, dia mitranga rehefa mahazo rafitra miraikitra amin'ny ratra eo amin'ny fametahana eo alohan'ny taolana ombelahin-tongony isika. Ity aretina ity dia mety hisy fiatraikany amin'ny olon-drehetra amin'ny taona rehetra, saingy mirona hitranga indrindra amin'ireo izay manelingelina ny tongony matetika.
Ny lahasa lehibe indrindra amin'ny fascia plantar dia ny fampihenana ny enta-mavesatra rehefa mandeha isika. Raha simba izany, ary tsy misy fepetra mavitrika, dia afaka mandeha miaraka amin'ny plantar fasciitis mandritra ny fotoana lava be ianao. Ny sasany aza mandeha amin'ny lalan-dratsin'ny habibiana lava izay isehoan'ny fahavoazana hatrany hatrany. Ny tranga hafa maharitra dia mety maharitra mandritra ny 1-2 taona. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fidirana an-tsehatra, ao anatin'izany ny fanazaran-tena (fanatanjahan-tena sy ny fampihetseham-batana araka ny aseho amin'ny horonantsary etsy ambany) sy ny fandrefesana tena - toy ny ireto ba kiraro famoretana plantar fasciitis ireto izay mampitombo ny fivezivezen'ny rà mankamin'ny faritra maratra (misokatra amin'ny varavarankely vaovao ny rohy).
Ny fanadihadiana dia nanoratra ny fitomboan'ny fahatsapana fanaintainana amin'ny vatan'ny mpampifandray (fascia) amin'ireo tratry ny fibromyalgia (1). Misy porofo, araka ny voalaza etsy ambony, fa misy fifandraisana misy eo amin'ny tsy fahombiazan'ny sela mampifandray intramuscular sy ny fanaintainan'ny olona fibromyalgia. Izany dia mety hanazava ny fitomboan'ny tranga:
Epicondylitis medaly (kiho golf)
Epicondylitis any aoriana (Elbow Tennis)
Izy io dia mety noho ny fizotry ny fanasitranana tsy miasa ao amin'ireo izay misy fibromyalgia - izay indray mitarika fitomboan'ny tranga sy fahasahiranana amin'ny ady amin'ny ratra sy ny fivontosan'ny taolana sy ny fascia. Vokatr'izany dia mety hitarika amin'ny faharetan'ny toe-javatra toy izany raha voan'ny fibromyalgia ny iray.
Ny fifandraisana misy eo amin'ny Plantar Fascitis sy Fibromyalgia
Azontsika atao ny mijery antony lehibe telo mahatonga ny ahiahy hitombo ny trangan'ny plantar fasciitis amin'ireo izay manana fibromyalgia:
Anisan'izany i Allodynia fanaintainana fito fantatra amin'ny fibromyalgia. Midika izany fa ny famantarana ny fanaintainana sy ny fanaintainana malefaka, izay tsy tokony handratra indrindra, dia hadika amin'ny fomba diso ao amin'ny ati-doha - ary noho izany dia mahatsapa ho ratsy kokoa noho ny tena tokony izy ireo.
Fanasitranana mihena amin'ny tisu mampifandray
Ny fandinihana izay noresahintsika teo aloha dia nijery ny fomba nanondroan'ny mari-pamantarana biokimika ny fizotran'ny fanamboarana tsy simba amin'ny tendon sy ny tady mpampifandray amin'ireo izay misy fibromyalgia. Raha miadana kokoa ny fanasitranana, dia kely kokoa ny fikajiana ilaina amin'ny alohan'ny hahatongavanao amin'ny ratra maharary amin'ny faritra voadona.
Ny fikarohana teo aloha dia naneho fa ny fibromyalgia dia mifandray amin'ny fanehoan-kevitra mahery vaika amin'ny vatana. Fibromyalgia dia famaritana rheumatic tisu malemy. Plantar fasciitis, izany hoe ny fivontosan'ny takelaka tendon eo ambanin'ny tongotra, noho izany dia toa mifandray mivantana amin'ny fihenan'ny fihenan-tsakafo sy ny fihetseham-po mamaivay. Noho io antony io indrindra dia zava-dehibe kokoa amin'ny fitomboan'ny rà mandriaka amin'ny tongotra sy tongotra ho an'ireo tratry ny rheumatisme malemilemy. Akanjo famatrarana, toy ny ba kiraro famoretana plantar fasciitis, noho izany dia mety hanana andraikitra lehibe amin'ny ady amin'ny plantar fasciitis amin'ity vondrona marary ity.
Nolazainay fa ny fitomboan'ny fanehoan-kevitra mampihetsi-po sy ny fihenan'ny fanasitranana dia mety ho ampahany amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny plantar fasciitis sy fibromyalgia. Ity fitambaran-javatra ratsy ity dia mandray anjara amin'ny famoronana sela misimisy kokoa amin'ny fametahana tendon eo an-tsisin'ny tendron'ny taolana ombelahin-tongony. Mampalahelo fa izany ihany koa ny tranga ny tongotra irery dia tsy faritra iray izay manana fikorianan'ny rà tsara indrindra taloha. Io fivezivezena io no mitondra otrikaina, toy ny elastin sy collagen, mankany amin'ilay faritra hanamboarana sy hikolokoloana.
Fampiasana isan'andro ny Kitapo famoretana Plantar Fasite (izay manome tsindry ireo faritra mety amin'ny tongotra)
Fitsaboana ny Plantar Fascitis
Zava-dehibe amin'ny fanombanana sy fitsaboana feno ny plantar fasciitis. Ohatra, ny hamafin'ny kitrokely (mihena ny fivezivezena amin'ny vodin-tongotra) dia afaka manampy amin'ny fitomboan'ny enta-mavesatra amin'ny mekanika an-tongotra - ary noho izany dia singa iray mavesatra loatra amin'ny lozisin'ny tongotra. Amin'ny tranga toy izany dia ho zava-dehibe ihany koa ny fanentanana ny kitrokely sy ny kitrokely mba handray anjara amin'ny enta-mavesatra marina. Ny fenitra volamena amin'ny fitsaboana plantar fasciitis dia ahitantsika shockwave Therapy. Io no endrika fitsaboana miaraka amin'ny vokatra voarakitra an-tsoratra tsara indrindra manohitra ny plantar fasciitis. Ny fitsaboana dia matetika ampiarahina amin'ny fanentanana ny valahana sy ny lamosina raha toa ka voamarika ihany koa ireo tsy fetezana. Ny fepetra hafa dia mety misy ny asa hozatra mikendry manokana ny hozatry ny zanak'omby.
Sahirana amin'ny Fasilitis Plantar maharitra ianao?
Fanatanjahan-tena sy fanofanana miady amin'ny Plantar Fascitis
Ny programa fanofanana manohitra ny plantar fasciitis dia mikendry ny hanamafisana ny tongotra sy ny kitrokely, sady mamelatra ary mahatonga ny takelaka tendon ho malemy kokoa. Ny fanazaran-tena any an-trano dia azo tendren'ny mpitsabo aretin-tsaina, mpitsabo kiropractika na manam-pahaizana manokana momba ny fahasalamana mifandray amin'izany.
Ao amin'ny horonantsary etsy ambany dia azonao atao ny mahita programa fanatanjahan-tena misy fanazaran-tena 6 manohitra ny plantar fasciitis. Andramo kely ny tenanao - ary miaraha mifototra amin'ny tantaram-pahasalamanao sy ny endrikao isan'andro. Zava-dehibe ny hitadidiana fa mila fotoana ny famerenana amin'ny laoniny ireo sela simba ao ambanin'ny tongotra - ary tsy maintsy miomana hanao ireo fanazaran-tena ireo ianao, fara fahakeliny, 3-4 isan-kerinandro mandritra ny volana maromaro hahamarika ny fanatsarana. Mankaleo, fa izany no izy amin'ny plantar fasciitis. Aza misalasala mifandray aminay ao amin'ny faritra misy hevitra etsy ambany amin'ilay lahatsoratra na amin'ny fantsona Youtube anay raha manana fanontaniana izay tsapanao fa afaka manampy anao izahay.
Lahatsary: ​​Fanafody 6 hanoherana ny Plantar Fascitt
1. Liptan et al. Fasia: Rohy tsy hita ao amin'ny fahalalantsika ny pathology of fibromyalgia. J Bodyw Mov Ther. 2010 Jan; 14 (1): 3-12. doi: 10.1016 / j.jbmt.2009.08.003.
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny Sacroilitis [Torolàlana tsara] Fibromyalgia sy ny kitron'ny tongotra